I-Gemini Horoscope: Umqondiso we-Gemini Zodiac, imihla, ukuhambelana, iimpawu kunye neempawu - Gemini
Uphawu lwezodiac lweGemini IHoroscope yeGemini
Ulwazi ngeenkwenkwezi zeGemini x
Ngcono ukuhambelana ngokubanzi: Libra, Aquarius
Ukuhambelana ngcono kuMtshato kunye nobudlelwane: Sagittarius
Ixesha: NgoMeyi 20-Juni 20
Iinqaba zamanqaku: Uswiti, unothando, unomdla, uguquguquka, ukwazi ukufunda ngokukhawuleza kunye nokutshintshiselana ngezimvo.
Amanqaku abuthathaka: Uvalo, ukungahambelani, ukungaqiniseki.
IiGemini ezifana: Umculo, iincwadi, iimagazini, ukuncokola naye wonke umntu, uhambo olufutshane.
IiGemini azithandi: Ukuba wedwa, ukuvalelwa, ukuphindaphinda kunye nesiqhelo.
Ukucacisa kunye nokukhawuleza, iGemini imele iintlobo ezimbini zobuntu ezahlukeneyo kwaye awukwazi ukuba yeyiphi ephambi kwakho. I-Gemini inokuphuma, inxibelelane, kwaye ithande ukuzonwabisa, ngelixa okuchaseneyo kunokuba nzulu, ukucinga, ukuxhalaba, kunye nokungaqiniseki.
Njengophawu loMoya, iGemini inomdla kuzo zonke iinkalo zengqondo. Lo mqondiso wezodiac ulawulwa yiMercury, eyiplanethi emele unxibelelwano, ukubhala kunye nokufundisa abanye. Bathabatheka phantse yiyo yonke into esehlabathini yaye bavakalelwa kukuba abanaxesha laneleyo lokuva zonke izinto abafuna ukuzibona. Oku kubenza babe ngamagcisa abalaseleyo, ababhali kunye neentatheli. Uphawu lweGemini luthetha ukuba abantu abazalwa phantsi kwesi sibonakaliso ngamanye amaxesha bavakalelwa kukuba esinye isiqingatha sabo silahlekile, ngoko bahlala bekhangele abahlobo abatsha, abacebisi abatsha kunye nabalingane abatsha.
I-Gemini iyaguquguquka, inomdla, ithanda ulonwabo kwaye ifuna ukufumana yonke into, ke inkampani yabo ayidinwa.
Uthando kunye nesondo kuGemini
Ihlekisa kwaye ihlala iphakamisa umngeni wobukrelekrele, iGemini sisithandwa esivuthayo. Unxibelelwano lubaluleke kakhulu kwiGemini, njengoko kudibene nomzimba, kwaye xa ezi zinto zimbini zidibanisa, akukho mqobo. Unomdla kwaye uhlala ekulungele ukudlala ngothando, uGemini uya kuchitha ixesha elininzi kunye namaqabane awohlukeneyo ade afumane echanekileyo ehambelana nengqondo kunye namandla abo.
I-Gemini idinga ukuziva imincili, ukuhlukahluka, kunye nothando ukuze yaneliseke ngokupheleleyo. Xa uGemini efumana iqabane eligqibeleleyo, baya kunyaniseka kwaye bathembeke kwisiseko sabo.
Abo bazalwa phantsi komqondiso weGemini bangabantu bentlalontle kakhulu kwaye bathanda ukuchitha ixesha kunye nabahlobo kunye nosapho. UGemini unabahlobo abaninzi yaye uyakuthanda ukuncokola nokuqondwa, ngoko olunye lweempawu azijongayo kwabanye lunxibelelwano oluhle. Ngaphandle kokuhamba kakuhle kwencoko, uGemini uya kuphelelwa ngumdla ngokukhawuleza kwincoko. Usapho lubalulekile kubo, ngakumbi amalungu entsapho akhangeleka njengabo.
Ubuhlobo kunye nabantakwenu buxhaphake kakhulu phakathi kwamaGemini, kwaye ixesha abalichitha kunye nabo lixabiseke kakhulu. Iimbopheleleko zentsapho zilucelomngeni kuGemini, kodwa bayayazi indlela yokusingatha loo nto.
Gemini umsebenzi kunye nemali
Umsebenzi ofanele uGemini kakhulu ngumsebenzi ovuselela ubukrelekrele. IiGeminis zinobuchule, zinobuchule kwaye zihlala zingabantu abakrelekrele kakhulu, ngoko ke umsebenzi wabo kufuneka ube namandla kwaye ube ngumngeni. Nangona kunjalo, abawathandi amabala aphindaphindiweyo.
Awona msebenzi awufaneleyo lo mqondiso wezodiac yileyo yomfundisi-ntsapho, i-polemicist, umqambi, intatheli, umbhali, umshumayeli kunye negqwetha. Nawuphi na umsebenzi obonelela ngamathuba amahle okunxibelelana kwaye ubagcine bexakekile ngokwaneleyo mkhulu. UGemini unokuba ngumrhwebi olungileyo kakhulu. Ukudala iingcamango ezintsha kunye nokusombulula iingxaki ziindawo apho iGemini inokukhanya kuyo yonke inkazimulo yabo.
Ukugqiba phakathi kokusebenza kunye nokuzonwabisa kunokuba lukhetho olunzima kwiGemini. Nangona beyijonga imali njengedemon eyimfuneko, uninzi lwabo aluyi kuchitha ixesha elininzi lucinga ngendlela yokuyifumana.
Indlela yokuhenda indoda yeGemini
Indoda yeGemini inomdla kwaye igcwele ubomi, ngoko ke akukho mzuzu onzima kunye naye. Ungumntu onomdla kwaye unoburharha, ngoko ke unokuba liqabane elifanelekileyo ukuba ungumntu odlamkileyo nonamandla.
Amadoda angamaGemini athanda ukuthetha ngokwemvelo kwaye ayakuthanda ukudlala ngothando, ngoko ke iintlanganiso zikawonke wonke lukhetho olubi ngokukodwa ukuba ufuna ukubahenda, njengoko bahlala bephambili ingqalelo.
Olunye lweempawu ezimbi kakhulu zeGemini kukuthambekela kwabo ukuba bajonge phezulu kunye nokungazithembi kumandla abo okwenza izigqibo. Ubuntu beGemini buphawulwa ngobumbini. Amadoda angamaGemini ayaguquguquka kodwa akrelekrele nto leyo ewenza abe nomtsalane ngakumbi kwabasetyhini.
Akunakwenzeka ukunamathela kwindoda ezelwe phantsi kophawu lweenkwenkwezi zeGemini. Ukuba ufuna ukumhenda, kufuneka wazi ukuba ufuna ukuvuselela ingqondo kunye nokwahluka. Yiba mnandi, ukondla, ukuhleka amahlaya akhe, kwaye ungoyiki ukuzama into entsha ebhedini. Ukwahlukahlukana ngundoqo xa kufikwa ukuhenda indoda Gemini. Nangona kunjalo, gcina zonke iimvakalelo ngaphandle kwengxoxo kwaye ugcine izinto zilula.
Ukwabelana ngesondo kunye nendoda yeGemini kunokuba ngamava amnandi, kodwa ukuba awufuni ukufumana izinto ezintsha, mhlawumbi uya kuba nesithukuthezi.
Indlela yokuhenda umfazi weGemini
Ukuba ufuna ukuhenda umfazi weGemini, kuya kufuneka ukwazi ukujongana nendalo yakhe emibini. Abasetyhini baseGemini banokuba nomdla kunye nobubele umzuzu omnye, kwaye kude olandelayo. Oku kungumphumo wotyekelo lwabo lwemvelo lokulumka eluthandweni.
Umfazi ozelwe phantsi komqondiso weGemini unokuba nomdla kakhulu, uhlekisayo, unengqondo kwaye uthambile. Enye yeempawu ezintle zeGemini kukuvuleka kwabo.
Nangona ngokuqhelekileyo umfazi weGemini ulala ngesondo ngokukhawuleza, ukuba kubudlelwane obunzulu kunye nokuzinikela kuya kuthatha ixesha kunye nomonde. Nangona kunjalo, xa efumene indoda ekwaziyo ukwanelisa iminqweno yakhe yesini kunye nengqondo, umfazi weGemini uya kuba ngowokuqala ukucebisa ukuba ayeke nje ukuthandana kwaye aqale ukuthandana.
Umfazi ozelwe phantsi kophawu lweGemini unokuba liqabane elifanelekileyo kuwe, kuphela ukuba uyakwazi ukulandela imfuno yakhe eqhubekayo yokufumanisa imingeni emitsha yengqondo neyesondo. Ngakolunye uhlangothi, isondo kunye nomfazi weGemini soze ibe yinto ekruqulayo.
Umfazi weGemini ukrelekrele kakhulu, ngoko ke ukuba ufuna ukumfundisa into angayaziyo, uya kumkholisa kwaye ukwandise amathuba akho okumphumelela. Ngokubanzi, ukuthandana umfazi Gemini kunokuba amava umdla kakhulu kwaye aphakamisa.
Iimpawu ezihambelana neGemini: Ingonyama , I-ram , Enyulu , Aquarius
Emanzini Umhlaza Gemini Virgo I-Scorpio